Himalaya Dainik » एसपी बिष्टलाई यसकारण पक्राउ गरेर जेेे चलान गर्नुपर्छ ? सहमत भए शेयर गरौँ
एसपी बिष्टलाई यसकारण पक्राउ गरेर जेेे चलान गर्नुपर्छ ? सहमत भए शेयर गरौँ
गृह मन्त्रालयले निर्मला बलात्कार-हत्यामा प्रमाण लोपलगायत कसुरमा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीशप्रसाद भट्टलाई बिहीबार बर्खास्त गरिसकेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टलाई हिरासत लिएर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ अनुसार उनीहरूविरूद्ध तीन मुद्दा आकर्षित हुन्छन्।
पहिलो, दफा ८९ अनुसार झुटा प्रमाण बनाउन पाइँदैन। यस्तो कसुरमा पाँच वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ। एसपी विष्टले निर्मला बलात्कार-हत्या प्रकरणमा दिलीपसिंह विष्टलाई प्रमाण बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ।
दोस्रो, दफा ९३ अन्तर्गत एसपी विष्टलाई हिरासत लिन सकिन्छ। उक्त दफामा ‘कसैले कुनै कसुरदारलाई बचाउने किसिमले कुनै प्रमाण दबाउन वा नष्ट गर्न पाउँदैन’। यस्तोमा तीन वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ।
एसपी विष्टलाई प्रमुख रूपमा लागेको आरोप नै यही हो। उनलाई निर्मला बलात्कार-हत्याको प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा बर्खास्त गरिएको छ।
विष्टमाथि दफा ८१ पनि आकर्षित हुन्छ। उक्त दफा अनुसार सरकारी कामको सपथ लिएको व्यक्तिले झुटो कुरा व्यक्त गर्न पाइँदैन। यस्तो गरेमा दुई वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ। एसपी विष्टले निर्मला प्रकरणमा झुट मात्र होइन, झुटो प्रमाण नै स्थापित गराउन खोजेको देखिइसकेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विष्टमाथि मुलुकी फौजदारी संहिताको प्रमाण नष्ट कसुर अन्तर्गत सिधै हिरासत लिएर कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले प्रहरी र गृहको काम कारबाहीमा थप शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए।
‘गृह मन्त्रालयले जे-जे कसुरमा विष्टलाई बर्खास्त गरिएको भनेको छ, ती कसुरमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुन्छ, हिरासत लिएर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ,’ अर्यालले भने,
‘सेवाबाट हटाउनु ठूलो कारबाही होइन, निर्मला बलात्कार-हत्या राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ।’
यसबाहेक अभियुक्त करार गरिएका दिलीपसिंहलाई यातना दिएको आरोप पनि विष्टमाथि लागेको छ। सो आरोपमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। यस्तै, न्याय माग्दै गएका जनतामाथि गोली चलाइएको थियो। गोली चलाउने आदेश विवादास्पद बनेको थियो।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले एसपी विष्टहरूको कसुरमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताए। उनले हाललाई सेवाबाट हटाइएको र पछि देखिए बमोजिम हुने बताए।
प्रकाशित मिति ९ कार्तिक २०७५, शुक्रबार १२:४६